Budata Splashy Cats APK maka Android
Budata Splashy Cats
Free Budata maka Android (40.00 MB)
Budata Splashy Cats,
Nwamba Splashy bụ egwuregwu gam akporo gam akporo ebe anyị ji nwamba mara mma banye njem mmiri na-adịghị agwụ agwụ na osimiri. Anyị na-agbalị igwu mmiri nosimiri site na ijide alaka osisi nke nwere nwamba na-adọrọ mmasị na egwuregwu ahụ, nke na-egosi na ọ nwere àgwà iji dọta ndị mmadụ nọ nafọ ndụ niile na ihe ngosi ya na egwuregwu.
Ebumnuche anyị na egwuregwu ahụ, nke gụnyere ihe karịrị ụdị nwamba iri atọ, bụ igwu mmiri nosimiri dị ka anyị nwere ike. Anyị na-agbalị ka anyị ghara ịkụ nkuku nakụkụ osimiri ebe anyị nwere ike ịga nihu site na ịbịaru zigzag, anyị agaghịkwa emetụ anụmanụ ndị dị ka nnụnụ na frogs aka.
Iji duzie nwamba na-arapara nalaka osisi na osimiri, mgbe anyị rutere nakụkụ akụkụ, ọ ga-ezuru imetụ ebe ọ bụla ihuenyo ahụ aka. Usoro njikwa dị mfe, ma ebe ọ bụ na anyị enweghị ohere igwu mmiri ozugbo na osimiri, ọ bụrụ na anyị ada ngwa ngwa, anyị na-etinye ndụ nwamba anyị nihe ize ndụ.
Splashy Cats Ụdịdị
Nha faịlụ: 40.00 MB
Mmepụta: Artik Games